တဂ္ဂလော့ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
တဂ္ဂလော့ ဘာသာစကား (အင်္ဂလိပ်: Tagalog language; /təˈɡɑːlɒɡ/, tə-GAH-log; Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]) သည် ဩစထြိုနေးရှန်းဘာသာစကားများအနက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလူဦးရေ လေးပုံတပုံခန့်ရှိသော တဂ္ဂလော့တိုင်းရင်းသားတို့၏ ပြောစကားဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၌ ဒုတိယ လူသုံးအများဆုံးဘာသာစကားလည်း ဖြစ်သည်။ စံပြုပြီးသော တဂ္ဂလော့စကားကို ဖိလစ်ပိုင်စကားအဖြစ် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနည်းတူ ရုံးသုံးအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်သည်။
မက်ထရိုမနီလာ၊ တဂ္ဂလော့တောင်ပိုင်းနှင့် အလယ်လူဇွန်
၂၂.၅ သန်း (၂၀၁၀)
စုစုပေါင်း ၂၃.၈ သန်း (၂၀၁၉)
လက်တင် (တဂ္ဂလော့/ဖိလစ်ပီနို အက္ခရာ)၊
ဖိလစ်ပိုင် (ဖိလစ်ပီနို အသွင်ဖြင့်)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ တဂ္ဂလော့ဘာသာစကား အဓိက ပြောဆိုသော ဒေသများ
ဘီကိုး၊ အီလိုကာနို၊ ဝိစာရန်၊ ကပံပန်ဂန်၊ ပန်ဂါစီနန် စသော ဖိလစ်ပိုင်၌သုံးသည့် အခြားဘာသာစကားများနှင့်လည်း အတော်နီးစပ်သည်။ သို့သော် ထိုင်ဝမ်ရှိ ဖော်မိုဆာ၊ မလေးရှားနှင့်အင်ဒိုနီးရှားတွင်ပြောသော မလေး၊ ဟာဝိုင်အီယန်၊ မာအိုရီနှင့် မလဂ္ဂဆီစကားများကဲ့သို့ အခြားဩစထြိုနေးရှန်းဘာသာများနှင့်မူ အင်မတန်ကွဲလေသည်။
တဂ္ဂလော့သည် ဩစထြိုနေးရှန်းဘာသာစကားစုတွင် ပါဝင်ပြီး ဖိလစ်ပိုင်ပြည်မ၏ လူသုံးများဘာသာစကားဖြစ်သည်။ မလဂ္ဂဆီ၊ ဂျာဗားနိ၊ မလေး၊ (တီမော၌ပြောသော) တီတံ၊ (ထိုင်ဝမ်၌ပြောသော) ယာမီစကားတို့နှင့် ဆက်စပ်သည်။ ဘီကိုးနှင့် ဝိစာရကျွန်းစုများ၌သုံးသော ဘီကိုးနှင့် ဝိစာရန်စကားအပြင် ဝရေဝရေ၊ ဟီလီဂေနွန်နှင့် ဆီဘွာနိုစကားတို့နှင့်မူ အလွန်နီးစပ်သည်။
တဂ္ဂလော့ဟူသော ဝေါဟာရမှာ တဂ္ဂ-အီလော့ (မြစ်တွင်းနေ) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ တဂ္ဂမှာ နေသူ၊ အီလော့မှာ မြစ်ဖြစ်သည်။ ဘာသာဗေဒပညာရှင် ဒေးဗစ်ဇော့နှင့် ရောဘတ်ဘလတ်တို့က တဂ္ဂလော့နှင့် ဖိလစ်ပိုင်ပြည်မရှိ အခြားတိုင်းရင်းသားစကားတို့မှာ အရှေ့မြောက်ဘက် မင်းဒနောင် သို့တည်းမဟုတ် အရှေ့ဘက် ဝိစာရကျွန်းများ၌ အခြေတည်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။
အစောဆုံးတွေ့ရသော တဂ္ဂလော့စကားကို ၁၀ ရာစုမှ လဂူနာကြေးစာလွှာတွင် တွေ့ရသည်။ ရှေးဟောင်းမလေးအက္ခရာများဖြင့် ရေးထားသော တဂ္ဂလော့စကားဖြစ်သည်။ တဂ္ဂလော့စကားဖြင့်ထုတ်သော ပထမဆုံး ပုံနှိပ်စာအုပ်မှာ ၁၅၉၃ ခုထုတ် "ခရစ်ယာန်ကြေညာစာတမ်း" ဖြစ်သည်။ စပိန်ဘာသာဖြင့်ရေးသောစာအုပ်ကို ခေတ်ဟောင်းတဂ္ဂလော့နှင့်ရော ယခုအထိ စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် ဘိုင်ဘျင်အက္ခရာနှင့်ပါ ပြန်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တင်အက္ခရာကိုအခြေခံကာ အရေးအက္ခရာရအောင် စပိန်တို့က ဖန်တီးကြိုးပမ်းပေးသည်။
စပိန်လက်အောက်ခံအဖြစ်နေသည့် နှစ်ပေါင်း ၃၃၃ ခုအတွင်း စပိန်တရားဟောဆရာတို့က သဒ္ဒါနှင့်အဘိဓာန်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဝေသည်။ ၁၆၁၀ ပြည့်တွင် ဒိုမီနီကန်ဘုန်းတော်ကြီး ဖရန်စစ္စကိုဘလန်းကက်ဒီဆန်ဂျို့က "တဂ္ဂလော့ဘာသာစကား၏အနုအလှတရားနှင့်စည်းမျဉ်းများ" (Arte reglas de la lengua tagala) ကို ဘတန်းမြို့၌ ထုတ်ဝေသည်။ နောက်ထပ် တည်းဖြတ်သောစာအုပ်များကို ၁၇၅၂ တွင်လည်းကောင်း၊ ၁၈၃၂ တွင်လည်းကောင်း ထုတ်သေးသည်။ ၁၆၁၃ ခု၌ ဖရန်စစ္စကန်ဘုန်းတော်ကြီး ပီဒရိုဒီဆန်ဘွယ်နဗန်တူရာက တဂ္ဂလော့အဘိဓာန်ဖြစ်သော "တဂ္ဂလော့ဘာသာ ဝေါဟာရာအဖြာဖြာ" (Vocabulario de la lengua tagala) ကို လဂူနာပြည်နယ်၊ ပီလာမြို့၌ ထုတ်သည်။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Tagalogic"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Tagalog-Filipino"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ According to the OED and Merriam-Webster Online Dictionary
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တဂ္ဂလော့ဘာသာစကား&oldid=677202" မှ ရယူရန်
၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။